Archive du 20190930
Raharaha Ambohitrimanjaka Mikoropaka ny fitondrana !
Re izao fa may volon-tratra ny ao an-dapa, indrindra fa ny ekipa eny Ambohitsorohitra izay misy ny departemanta serasera eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika na ny Prezidansa.
Sehatra iraisam-pirenena Resin`i Ntsay lavitra Rajoelina
Nihaona sy niresaka tamin’ny Sekretera Jeneralin’ny Firenena Mikambana ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Ntsay Christian nandritra ny diany niatrika ny Fivoriambe faha-74 ho an’ny Firenena Mikambana.
Fifidianana ben’ny tanàna Hanara-maso akaiky ny TIM
Fifidianana azo arahi-maso tsara ny fifidianana ben’ny tanàna ary ny antoko TIM manokana dia efa manana ny ezaka sy paikady amin’izao
Misokatra ny fandraisana ny dosie sy antontan-taratasy ho an’ireo maniry ny Tale Jeneraly sy Tale Jeneraly lefitra ho an’ny orinasam-panjakana JIRAMA.
Afera CEG Analamahitsy Tsy any am-ponja akory ilay atidoha ?
Misy resaka mivoaka amin’izao fa tsy migadra any am-ponja velively ilay heverina fa tena atidoha izay voarohirohy tamin’ny raharaha famarotana ny tany misy ny CEG eny Analamahitsy. Anisan’ireo naiditra am-ponja vonjimaika izy io.
Pastera Heritiana - Vahao ny Oloko “Mpandamina izahay fa tsy mpanakorontana”
Mpandamina izahay fa tsy mpanakorontana araka ny fanenjehan’ireo tsy tia, hoy ny pastera Heritiana Randriarimalala, filoha mpanorina ny fiangonana Vahao ny oloko eto Madagasikara.
Baolina kitra Afrikanina 2019 Raraka avokoa ny Fosa Juniors sy ny CNaPS Sport
Nifarana teo amin'ny fihodinana faharoa ny lalana ho an'ny CNaPS Sport amin’ny fifaninanana fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona Afrikanina 2019/2020.
Rugby à XV “GOLD TOP20-2019” Tena nangotraka tokoa teny amin’ny kianjan’i Makis
Tontosa tamin’ny sabotsy 28 sy omaly alahady 29 septambra 2019 teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka ny andro voalohany amin’ilay
Tapitra omaly alahady 29 septambra ilay fifaninanana Open Grand Prix d e Karate notontosaina tany Turquie.
Manao toy ny mpitari-bato vilam-bava, ka hafa ny tondroin’ny molotra, ary hafa ny ataon’ny tànana, hoy ilay fomba fitenintsika.
Fahaleovantena ara-tsakafo Hampitomboina avo efatra heny ny voka-bary
Tantsaha amina tokantrano miisa 1 600 ao amin`ny kaominina dimy (Ambonanindovoka, Ambohimahamasina, Ambohimandroso,
Fandrosoan’ny firenena Ilaina ny fananana siantifika
Mihavitsy an’isa hatrany ny mpianatra Malagasy tia sy mirona amin’ny taranja siantifika araka ny tatitra nandritra ny fankalazana ny faha-130 taonan’ny IOGA (Insititut Observatoire Geo-physique d’Antananarivo).
Ady amin’ny tsy fanjariantsakafo Hampandraisina anjara ireo parlemantera mpamolavola lalàna
Manana tanjona ny hamondrona an’ireo parlemantera eto amintsika, amin’ny maha mpanao lalàna azy ireo, ny vovonana HINA, na ny Hetsika Iraisana Natokana ho an’ny Ady amin’ny Tsy fanjariantsakafo.
Fanafihana teny Ivato Nongotan’ireo jiolahy ny «grille de protection»
Mahazo vahana ny asan-jioalhy eny Ivato sy ny manodidina ankehitriny.
CENAM 67HA Voasambotra ilay mpanenjika vehivavy amin’ny sabatra
Zava-maranitra no entin’ny jiolahy iray manenjika olona, indrindra vehivavy am-pandehanana lehilahy iray,
Andravoahangy Ramatoa iray tratra nampiasa vola sandoka
Vehivavy zokiolona iray no heverina fa hanapitra ny andro sisa hiainany any am-ponja.